होटेल, लजमा सेतो तन्ना नै प्रयोग किन ? कारण यस्तो !Samachar Pati
होटेल, लजमा सेतो तन्ना नै प्रयोग किन ? कारण यस्तो !
२३ साउन l होटेल, लज तथा धर्मशालाका ओछ्यान (बेड)मा सेतो तन्नाको प्रयोग गरिन्छ । आखिरी किन सेतो तन्ना नै प्रयोग गरिन्छ ? यसबारे कमैलाई मात्रै थाहा होला । सेतो सबैभन्दा सफा देखिने तन्ना हो । सोतो तन्ना ओछ्याउनुको पहिलो कारण भनेको सफा देखिनु र देखाउनका लागि नै हो। सेतो तन्नामा केही झर्यो भने दाग बस्छ। यसकारण ग्राहकले खाने पिउने बेलामा पनि निकै ध्यान राख्छन्। सेतो कपडामा ब्लीच सजिलै हुन्छ। ब्लीजले सेतो तन्नामा चमक आउँछ।
सेतो रंगले मनलाई शान्त बनाउँछ। सेतो तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निदाउन सकिन्छ। सेतो तन्ना होटलमा यस कारण ओछ्याइन्छ की ग्राहकले रिल्याक्स गर्न सकून्।वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्य रंगको तुलनामा सेतो रंगको तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निन्द्रा लाग्छ। र बारम्बार ब्युँझिँदैनन्।
राजधानीमा स्कुटी चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा बौद्ध बस्ने वर्ष २० का दाबा शेर्पालाई पक्राउ
जान्नुहोस असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि गर्भ बस्न नदिने घरेलु उपाय